सुन्दर आंकडा - लगभग हरेक स्त्रीको सपना। तर, यो सधैं यो Aspire गर्न, विशेष गरी यदि वजन हुनुको समस्या छन् प्राप्त गर्दैन। वजन गर्न प्रेरणा फरक हुन सक्छ। यो एक स्लिम आंकडा बाटो मा धेरै सम्भावनाहरू को कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने आफ्नो इच्छालाई छ कि सम्झना गर्न मुख्य कुरा। यस्तो उनको साथीहरूसँग एउटा शर्त रूपमा प्रोत्साहन, अरूले आफूलाई तुलना मोडेल सहित स्थिर वजन साझा, तर छैन धेरै शक्ति। आफ्नो प्रभाव सामान्यतया गैर-टिकाउ छ, त्यसैले किलोग्राम, पनि कम चाँडै फिर्ता टाइप।
वजन प्रेरणा हानि - एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु, एक पतला आंकडा छ गर्न आवश्यक छ। यो कुरा पर्याप्त र महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। त्यसैले, केही गम्भीर उत्तेजना लागि आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा चिन्तित हुन सक्छन्। यो धेरै अक्सर भन्ने ज्ञात छ वजन कुपोषण, जो बारी मा रोगहरु को एक किसिम हुन सक्छ संग सम्बन्धित छ। वजन कम गर्न यो प्रेरणा मात्र पातलो आंकडा पाउन छैन, तर पनि एक स्वस्थ जीवन शैली को अवस्थामा एक लामो समय को लागि कि समर्थन यसलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
अक्सर महिलाहरु आफू र अरूलाई खुसी पार्न आहार मा जानुहोस्। यो विधि, यसबाहेक, सबैभन्दा आफ्नै आत्म-सम्मान बढाउन सम्भावना छ। यो कि उल्लेख गरेको छ पतला केटी उनको शरीर संग खुसी, सबै भन्दा जो निकै आफ्नो तत्काल वातावरण तिनीहरूलाई मात्र तर पनि जीवनमा सुविधा राम्रो मुड, छन्।
तपाईं वजन खोने मा योजना भने, प्रेरणा तपाईंलाई लागि हो कि एक हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, केही तराजू मा संख्या बढाउने। यो संख्या प्रत्येक दिन कम हुनेछ भने, आहार वा खेल को प्रभाव पनि बढी देखिने हुनेछ। तथापि, वजन गर्दा महत्त्वपूर्ण केही क्षणमा पालन गर्न छ। उदाहरणका लागि, यो प्रक्रिया लगभग एकै समयमा सिफारिस गरिएको छ, यो पहनने को एक न्यूनतम संग मनमोहक छ। यसरी, वजन गर्न प्रेरणा मा सकारात्मक (वजन कम गर्न) परिणाम रसिद प्रभावकारी हुनेछ। अन्यथा, यदि नम्बर स्थान वा सबै वृद्धि हुनुहुन्छ, यो आवश्यक लक्ष्य प्राप्त गर्न र अतिरिक्त उपाय लिएर को तरिका को सम्भाव्यता विचार छ।
उदाहरणका लागि, केही आकार सानो लागि कुराहरू तपाईंलाई रुचि (सामान्यतया एकदम महंगा) खरीद जस्तै, अतिरिक्त वजन यो चाल प्रयोग गुमाउने लागि प्रोत्साहन रूपमा केही महिला। शेष साथै तपाईंलाई एउटा विशेष प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नाप्ने टेप, जो समस्या क्षेत्रमा मापन गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक एक दैनिक आधार मा के छैन। तपाईं उदाहरण, एक हप्ता वा केही दिनको लागि कुनै खास समय अवधि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक समय कम हुनेछ जो तथ्याङ्कले, एक अतिरिक्त प्रोत्साहन, चुनिएको विधि को प्रभावकारिता पुष्टि हुनेछ।
याद गर्न मुख्य कुरा: वजन गर्न प्रेरणा, छ सबै को पहिलो आफूमा। कुनै विश्वास र भाषण परिचितहरू र मित्रहरू दृष्टिकोण प्रभावित गर्न र व्यक्ति त्यसो गर्न कुनै इच्छा छ भने गतिविधि प्रोत्साहित गर्न सक्षम हुने छैन। आखिर, हामी धेरै हामी चाहनुहुन्छ केहि भने मात्र, हामी यसलाई हासिल गर्न सुरु हुनेछ, र आफ्नो लक्ष्य हासिल।
मनोविज्ञान मा आत्म को समस्या। आत्म - यो छ ...
बेवास्ता - भावनात्मक दुरुपयोग को पुरानो प्रकारका एक। मनोवैज्ञानिक को दृश्य को बिन्दु
Eysenck सर्कल: वर्णन, प्रयोग र व्याख्या लागि निर्देशन
मान, सुविधा र रोचक तथ्य: मनोविज्ञान मा नीलो रंग
आत्म-सम्मान कसरी जुटाउने?
एक लूटेराण के हो? Lutheranism र Calvinism को तुलना। समानता र Lutheranism र Calvinism बीच मतभेद: तालिका
इस्राएलका Melanoma उपचार
आभूषण आफ्नै हात
एक बच्चा संग शिल्प विकास 3-4 वर्ष
स्मार्टफोन "वेगा कहां": ग्राहक समीक्षा
अतिरिक्त के। को अर्थ